उपेन्द्र र सलोनी बने कान्तिपुर आइडल — Motivate News
Posted on March 22, 2018 by motivate news
काठमाडौँ – सनराज इन्टर टेन्ट्मेन्ट प्रा. लि. को आयोजनामा भएको कान्तिपुर आइडल खुल्ला गायन तथा नृत्य प्रतियोगीताको उपाधि उपेन्द्र सहयात्री राई र सलोनी मल्लले चुमेका छन् ।
गायन तर्फ फर्स्ट रनरअप समिर खरेल र सेकेन्ड रनरअप अभिषेक पोख्रेल र नृत्य तर्फ फस्ट रनरअप आर्या सुबेदी र सेकेन्ड रनरअप गणेश श्रेष्ठ भएका छन् ।
चैत्र ६ गते नाचघरमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा गायन तर्फ निर्णायकमा राज सिग्देल र राजेन्द्र कमल राई रहेका थिए । भने सन्तोष शर्मा र राजन कार्की कार्यक्रमको आयोजकले विजेतालाई विभिन्न उपाहारका साथै गिफ्ट ह्यापर प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रमका विजेताले बिभिन्न अवसर तथा पुरस्कार एकसाथ पाएका छन् ।
युवा, युवतीहरुको प्रतिभा निखार्दै उनीहरुको भबिष्य निर्माणमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याउने उद्देश्यले प्रतियोगीताको आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आयोजकले बताएका छन् ।